China Low Carbon Steel Shot ifektri abakhiqizi | TAA
Ukuqinisa okuphezulu, ukuqina okuphezulu, impilo ende yokusebenza.
Ukwephuka okuphansi, uthuli oluphansi, ukungcola okuphansi.
Ukugqoka okuphansi kwezinto zokusebenza, impilo ende yokufinyelela.
Nciphisa umthwalo wesistimu yokudonsa, yelula isikhathi sokusetshenziswa kwama-dedusting equipments.
Ezinye izinto ze-alloy
Ukungeza uCr Mo Ni B Al Cu njll.
Isakhiwo se-Duplex sihlanganise iMartensite neBainite
Isikrini No. Inch Usayizi wesikrini S70 S110 S170 S230 S280 S330 S390 S460 S550 S660 S780 S930
6 0.132 3.35 Konke kudlula
7 0.111 2.80 Konke kudlula
8 0.0937 2.36 Konke kudlula ≥90%
10 0.0787 2.00 Konke kudlula Konke kudlula ≥85% ≥97%
12 0.0661 1.70 Konke kudlula ≤5% ≥85% ≥97%
14 0.0555 1.40 Konke kudlula ≤5% ≥85% ≥97%
16 0.0469 1.18 Konke kudlula ≤5% ≥85% ≥97%
18 0.0394 1.00 Konke kudlula ≤5% ≥85% ≥96%
20 0.0331 0.850 Konke kudlula ≤10% ≥85% ≥96%
30 0.0232 0.600 Konke kudlula ≥85% ≥96%
40 0.0165 0.425 Konke ukudlula ≥85%
Ukukhathala Ukuhlolwa Kempilo
Umfanekiso wokuqhathaniswa kokusetshenziswa kwe-TAA I-LCB steel shot, ukhabhoni wensimbi ephansi kanye ne-high-carbon steel shot. (ukukhathala kokuhlolwa kokuphila kwamamaki ajwayelekile ngesilinganiso sejubane esinomthelela esingu-60.96m / s)
Ukusetshenziswa kokuqhathanisa-Ibanga elijwayelekile
Ngokuhlolwa kwempilo yokukhathala singakubona lokho: impilo yesevisi ye-TAA I-LCB Steel Shot iphindwe izikhathi eziyi-1.5 kunesibhamu esivamile se-carbon steel, ubude obuphindwe ka-2 kunokudutshulwa kwekhabhoni yensimbi ephezulu.
Blast yokuhlanza: Isetshenziselwa blast yokuhlanza ekubunjweni, die-thusi, UKWAKHA; isihlabathi ukususwa ekubunjweni, ipuleti lensimbi, H uhlobo lwensimbi, isakhiwo sensimbi.
Ukususa ukugqwala: Ukususa ukugqwala kokuphonsa, ukufaka, ipuleti lensimbi, uhlobo lwensimbi engu-H, isakhiwo sensimbi.
Ukudubula: Ukudubula ukukhishwa kwamagiya, izingxenye eziphathwe ukushisa.
Sand ukuqhumisa: Sand blasting yensimbi profile, umkhumbi ibhodi, steel board, steel impahla, steel isakhiwo.
Ukwelashwa kwangaphambili: Ukwelashwa kwangaphambi kwendawo, ibhodi lensimbi, insimbi yephrofayili, isakhiwo sensimbi, ngaphambi kokupenda noma ukumboza.
Langaphambilini Insimbi engagqwali
Olandelayo: Aluminium ukusika ucingo
Ingxubevange Low Carbon Shot
Ukuqhumisa okuphansi kwe-Carbon Steel Shot
I-Ferrosad Low Carbon Steel Shot
I-Low Carbon Bainite Steel Shot
I-Carbon Steel Shot Ephansi Yokulunguza
Umkhiqizi Wensimbi Wensimbi Ephansi
Okuphansi Carbon Steel Shot S110
Okuphansi Carbon Steel Shot S170
Okuphansi Carbon Steel Shot S230
Okuphansi Carbon Steel Shot S280
Okuphansi Carbon Steel Shot S330
Okuphansi Carbon Steel Shot S390
Okuphansi Carbon Steel Shot S460
Okuphansi Carbon Steel Shot S550
Okuphansi Carbon Steel Shot S660
Okuphansi Carbon Steel Shot S70
Okuphansi Carbon Steel Shot S780
Amashothi Wensimbi Ephansi weCarbon
I-S110 Low Carbon Steel Shot
I-Tocelik Low Carbon Steel Shot
Senze intuthuko enkulu ezintweni ezibonakalayo nakumasu ngesisekelo senqubo yokukhiqiza yendabuko. Sisebenzisa izinga okusezingeni ingxubevange steel wire njengoba substrate ukuthi ephakeme izakhiwo mechanical futhi kwenze kube uzinze kakhudlwana. Ukwenza ngcono i-wiredrawing craft eyenza inhlangano yangaphakathi iminyene. Ukwenza ngcono inqubo yendabuko yokuncika ethembele ngokuphelele ekuthinteni ukunciphisa umonakalo ngesikhathi se-blastin ...
I-Aluminium cut wire shot ebizwa nangokuthi i-aluminium shot, ubuhlalu be-aluminium, ama-aluminium granules, i-aluminium pellet. Yenziwe ngocingo lwe-aluminium esezingeni eliphakeme, ukubukeka kukhanya, kuyimidiya ekahle yokuhlanza nokuqinisa indawo yezingxenye zensimbi ezingenacala. Kusetshenziswa ikakhulu ukwelashwa kwendawo ye-Aluminium, imikhiqizo ye-Zinc noma izingcezu zomsebenzi ezinodonga oluncane emshinini wokuqhumisa. Imikhiqizo Yezobuchwepheshe be-Alum ...